Bit By Bit - Idebe ihe omume - 2.4.1.2 Ịbụ Enyi guzobere n'etiti ụmụ akwụkwọ
Researchers na-eji email ndekọ na administrative ndia ịghọta enyi guzobere. Nchọpụta a na-achọ na-emeso ndị incompleteness nke nnukwu data.
N'ọtụtụ ọnọdụ, nnyocha na-adịghị kechioma nwere ihe niile ha chọrọ na-akpaghị aka anakọtara na otu ebe. Abụọ obere nsogbu na-ezughị ezu ozi gbasara ndị mmadụ na a mismatch n'etiti usoro iwu chepụtara na data. Ma ndị a na nsogbu na-agwa okwu site Kossinets na Watts (2009) dị ka akụkụ nke mgbalị ha aka ịghọta otú mmadụ netwọk evolve.
Olee ihe enyemaka na-ekwu okwu, na-eme nnyocha na-eche na mmadụ netwọk evolushọn na-chụpụrụ site atọ atụmatụ: 1) Ọdịdị nke ẹdude mmekọrịta 2)-akọrọ eme (eg, dorms, klaasị) na 3) demographics. Ịghọta interrelationships n'etiti ndị a ihe atọ na-achọ longitudinal netwọk data jikọtara na ozi banyere ndị mmadụ n'otu n'otu 'demographics na-eme. Ihe omumu nwere ụfọdụ atụmatụ ndị a, ma ọ dịghị onye nwere ihe nile dị atọ.
Kossinets na Watts malitere ha research site enweta ihe email na ndekọ site na nnukwu mahadum. Otú ọ dị, ndị a email ndekọ naanị ndị na-ezughị ezu, ha adịghị agụnye ihe niile dị mkpa ịghọta ihe dị iche iche na-akwọ ụgbọala netwọk evolushọn. Ya mere, Kossinets na Watts merged ndị a email ndekọ, abụọ ọzọ isi nweta ihe ọmụma: omume igwe mmadụ ozi anakọtara site na mahadum na ozi banyere na-akọrọ eme (eg, amụrụ obibi ọmụma na a zuru ndepụta nke aha na ọmụmụ). Ozugbo atọ ndị a isi nweta ihe ọmụma, ọ bụla nke bụ na-ezughị ezu, e mechakwara gbakwụnyeghachi akwụkwọ ụfọdụ ọnụ Kossinets na Watts nwere ike data Ọdịdị maka nghọta netwọk evolushọn.
Ma, ọ dị otu ikpeazụ ịma aka na ha ga-emeri. Kossinets na Watts mmasị ịmụ otú netwọk mmekọrịta dị na nke a mahadum ghọrọ usoro nke mere na ha dị mkpa a ụzọ iji email na ndekọ n'ime enyocha onye e jikọrọ ya na onye na nke oge. Dị ka e kwuru na mbụ (Nkebi 2.3.2.1), a ụdị operationalization nke usoro iwu chepụtara bụ nnukwu ihe ịma aka mgbe eji dijitalụ metụtara na-elekọta mmadụ nnyocha. N'ikpeazụ, Kossinets na Watts kpebiri na mmadụ abụọ e weere ejikọrọ na oge \_ (t \_) ma ọ bụrụ na na naanị ma ọ bụrụ na ha gbanwere ozi ịntanetị (\_ (i \_) emailed \_ (j \_) na \_ (j \_) emailed \_ ( i \_)) na aga na ụbọchị 60. Nhọrọ ndị a abụghị aka ike; ha na-adabere nlezianya tụlee nke a ahụrụ anya gburugburu, na-Kossinets na Watts enyocha na ha pụta siri ike ka nhọrọ ndị a. Ke ofụri ofụri, ọ bụrụ na gị operationalization na-agụnye ị na-ahọrọ ụfọdụ kpọmkwem cutoffs-ekwu na 60 ụbọchị kama 30 ụbọchị ma ọ bụ ụbọchị 90-ọ bụ ezi echiche iji jide n'aka na gị pụta na-adịghị chebaara nke a nhọrọ.
Ozugbo Kossinets na Watts banyere nsogbu mere site incompleteness (eg,-efu omume igwe mmadụ ozi, na-efu ihe ọmụma banyere akọrọ ọrụ, na-efu usoro iwu chepụtara), ha nwere data nke nyeere ha aka ịghọta atọ isi agha na nwere ike ụgbọala netwọk evolushọn: 1) na Ọdịdị nke ẹdude mmekọrịta 2)-akọrọ eme (eg, dorms, klaasị) na 3) demographics. Agbanwe agbanwe na mbụ nnyocha, ha chọpụtara na ndị mmadụ na yiri demographics na-yikarịrị na-etolite mmekọrịta. Otú ọ dị, n'adịghị ka na mbụ ọmụmụ, ha chọpụtara na ụkpụrụ a na-ike mitigated site na ẹdude netwọk owuwu ma na-akọrọ eme. Ya bu, ihe-atù nke mbụ na-eme nnyocha hụrụ na ikpe kọwara data na mbụ na-eme nnyocha na-enweghị. Ya mere, site ọma na-emeso ndị incompleteness ha data, Kossinets na Watts ndị ike dokwuo anya na mmekọrịta nke a dịgasị iche iche nke dị iche iche ihe na ụgbọala elekọta mmadụ na netwọk evolutions.